Art. I-122 ye-Code Criminal ye-Russian Federation ifaka phakathi kwezinyathelo zayo zokwakheka kanye nezigwebo zokulungisa isenzo esibizwa ngokuthi ukutheleleka nge-HIV futhi, ngokufanele, sibophezele kulo. Njengamanje, izibalo zibonisa ukuthi inani lezigameko ezithiwa lizibophezele kakhulu lenyuka, futhi lokhu, okwamanje, kudinga ukunakekelwa okukhulu kwezinhlaka zomthetho.
Leli gciwane liholela ekuzivikelweni komuntu futhi liyingozi kakhulu empilweni yakhe. Ukwesaba ukuthi i-HIV ibangela ukutheleleka komzimba ngesifo esibi kangaka njenge-AIDS. Lesi sifo sithinta ngobuwula umuntu, ngoba okwesikhashana angeke asazi ukuthi usulelekile, futhi lokhu kushiya okungenani amathuba okuthola ukwelashwa.
Ikhodi Yezobugebengu mayelana nale ngozi yesifo inikeza izihloko ezingu-122, ezibeka isijeziso sokutheleleka komuntu oyedwa nomunye nge-HIV. Lesi sinqumo esihlakaniphile kakhulu ngabomthetho, ngoba i-AIDS, njengoba yaziwa, ihlanganisa ukufa komuntu, futhi okwesikhashana. Yingakho le nkinga yanikelwa kakhulu.
Art. I-122 ye-Code Criminal: uhlobo lobugebengu
Ukusabalala okukhulu kwalesi sifo sekuholele ekuhlanganiseni izindlela zokulwa nazo. Omunye wabo ngumthwalo wemfanelo wokuthelela umuntu onesifo. Ukwakhiwa okudingekayo kwalolu cala kungabonakala ngokucacile kwezobuciko. 122 we-Code Criminal. Umkhuba wezobugebengu awuyikushiya lo mbuzo eceleni, ngazo zonke izindlela kungenzeka ukuhumusha nokuchaza umkhuba ocacisiwe.
Ngakho, ukwakheka kufaka phakathi, njengokunye kunoma yikuphi ubugebengu, izimpawu ezigunyazayo nezokuzikhethela. Izangaphambili zidingekile ukuze kutholakale isenzo sokwethenjwa, futhi, ngokuyisisekelo, sokusungula ubugebengu, kuyilapho lesi sigaba singase sibe yingxenye yesenzo, kodwa kungenjalo. Futhi kungenxa yesichazo esifanele sokubunjwa ukucabangela ngayinye yezinto zayo ngokwahlukana.
Ubuhlobo bomphakathi, obhekene nokunciphisa engxenyeni yomenzi wobugebengu, into ekhona kulokhu isenzo sokuphepha kokubili komuntu kanye nempilo yakhe. Ukutheleleka nge-AIDS ngokungenakuphikwa kungakabiphi kuhlanganisa ukufa komuntu ohlukumezekile, ngokufanele, ukuhlaselwa ngokuqondile noma ngokungaqondile kwenziwe okunye ekuphileni komuntu.
Ngokuqondene nohlangothi lomgomo, izinto ezimbili zibalulekile lapha. Okokuqala yilokho okubekwe futhi ku-Art. 122 we-Criminal Code ye-Russian Federation, icala lihlelekile. Kwanele ukuba nethuba langempela lokuthelela umuntu noma uqale ukwenza izenzo zokutheleleka, futhi isenzo sizobhekwa siphelile. Ukuthi, ukuqala kwemiphumela akudingekile ngempela.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ubugebengu bubonakala kanjani ngaphandle. Uhlangothi lomgomo luboniswa ukuthi umenzi wobugebengu ubeka omunye umuntu engozini yokuthola isifo esingathí sina se-HIV, azi ngakho. Okusho ukuthi ulwazi mayelana nokutheleleka komuntu siqu kuyimpoqo. Uma lokhu kungaziwa, i-corpus delicti ngeke ibonise ngokwayo ezinjalo izenzo.
Ngaphezu kwalokho, u-Art. 122 okuyingxenye ezimbili zeCriminal Code of the Russian Federation isungula isenzo esenzelwe ukuthelela ngokuqondile umuntu osebenzayo nge-agent esebenzayo oyithwali noma umuntu ogulayo.
Umuntu owaziwa njengomuntu oyedwa futhi ufinyelele eminyakeni yobudala eyishumi nesithupha ukhuluma cishe noma yibuphi ubugebengu, ngaphandle kokunye okuhlukile. Ngokuqondene nokutheleleka ngaleli gciwane, Art. I-122 ye-Code Criminal inikezela ngokucacile njengento ekhethekile. Ngaphandle kwezidingo ezijwayelekile, lo muntu kumele abe ngumthwali wesifo noma ukugula ngokuphelele nge-AIDS. Ngaphandle kwalokho, ukwakheka ngeke kube.
Iwayini njengombonakaliso ohlangothini oluzithobayo luboniswa, njengoba kuyaziwa, ebuhlotsheni bomuntu bomuntu ngobugebengu obukwenzile, nasemiphumeleni ezayo ngenxa yalokho. Ukutheleleka ngalesi sifo esiyingozi kungenziwa ngesimo senhloso, okungenzeka kokubili ngendlela eqondile nangendlela engafanele, futhi futhi kungabonakali ukuthi kungenzeka, kodwa kuphela ngendlela yokuziqhenya, okungukuthi, nethemba lokulondoloza ukuthi imiphumela iyoqedwa.
Kubalulekile ukuhlukanisa ngokufanele phakathi kokuhloswe kanye nokungaqondisi futhi uqonde ukuthi ayikho enye yezinhlobo zecala ayikwenzi isenzo sibe yingozi kakhulu. Inhloso njalo ukuqaphela izenzo zomuntu, kanye nesifiso semiphumela.
Ukwehliswa kusho ukuthi umuntu akafuni le miphumela emilandelayo noma ucabanga nje, ngaphandle kwalokho, ngaphandle kwesizathu esanele sokuthi ngeke eze.
Izimo ezinzima eziholela ekuqokweni kwesijeziso esibi kunazo zonke zibhekiswe ezingxenyeni ezintathu no-4 ze-Art. 122 we-Code Criminal. Izimpawu ezifanelekayo zihlanganisa izenzo zokubeka umuntu engozini yokutheleleka, kanye nokutheleleka ngqo ngokutheleleka, okwenziwe:
Ngokuqondene nabantu ababili noma ngaphezulu;
Umuntu owenza imisebenzi yakhe (okungukuthi uchwepheshe) futhi wakwenza ngokungalungile.
Uhlu lwalezi zimo luphelele. Isibonakaliso ngasinye asidingi incazelo ehlukile noma incazelo. Endabeni yokwenza lobu bugebengu, umuntu, ngokuqondene nomsebenzi wakhe, akayena ophethe isifo sofuba, akaphethwe yi-AIDS, futhi ukutheleleka kuwumphumela wemisebenzi yakhe.
Ukuxoshwa ekuphoqweni kobugebengu
Njengoba wazi, Art. I-122 ye-Code Criminal ye-HIV igciwane lesandulela ngculaza inikeza isigwebo esinzima kakhulu - kuze kuphele iminyaka eyisishiyagalombili ejele. Lesi sanction sichaza lobu bugebengu njengesibi. Kodwa-ke, isishayamthetho samukele futhi inothi kulesi sihloko, okwenza sikwazi ukukhulula umuntu ekubolekeni.
Umuntu obeka omunye umuntu engozini yokutheleleka noma ngisho nokumtheleleka, angase akhululeke ekuzibophezelweni. Kulokhu, izimo ezimbili ziyadingeka.
Umuntu onesandulela ngculaza kufanele azi ngokutheleleka kwesandulela ngculazi kakade.
Kumele avume noma yisiphi isenzo esingagcina ekuholela ekutheleleni.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi lesi sigaba somthetho sivumelekile kuphela ezimweni ezichazwe ezingxenyeni ezilodwa nobili kokubuyekezwa kwekhodi ye-Criminal Code.
Lapho kukhona izimo ezimbi, lokho kungenakwenzeka, ngisho noma umuntu ogulayo ayenolwazi oludingekayo futhi wamukeleka ukwenza izenzo ezithile.
Iseluleki Sokubhekana Nezigebengu Zesigebengu Kungasiza Kanjani Emibandela Yobulungisa BeRussia?
Njengoba kushiwo ku-Art. 337 we-Code Criminal? Kungaba yini isijeziso sokushiya umbutho wezempi ngokungazelelwe?
Izakhiwo ezisebenzisekayo ikhalori wokudla namanzi herculean
Izinhlobo imizwa - kusuka ezihlukahlukene kangaka?
Umama Stifler sika. Umlingisikazi Dzhennifer Kulidzh: Biography, Filmography, impumelelo umfanekiso odumile
Ngiyanihalalisela wedding yokugubha usuku 25th
Izinwele zakuqala: izimbangela kanye nokwelashwa kwabesilisa nabesilisa
Umqondo ekhaya ezenziwe ngesandla. Indlela yokwenza imihlobiso for indlu ngezandla zakhe?